🥇संसारभरका सब भन्दा महँगो घरहरू
संसारभरका सब भन्दा महँगो घरहरू
17-11-2019 | अन्य
यदि तपाईंले चिठ्ठा जित्नुभयो वा तपाईंले एक ठूलो उत्तराधिकार प्राप्त गर्नुभयो र तपाईं विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्ये एक बन्नुभयो भने, तपाईंको घर कस्तो हुनेछ? तल हामी तपाईलाई यस संसारमा सब भन्दा महँगो हवेली देखाउछ संसारभरि वितरित।
एन्टीला, मुम्बई (भारत): अमेरिकी $ १ बिलियन
यो भवन जुन पौराणिक टापु एन्टिलियाबाट यसको नाम लिन्छ, व्यापारी र अरबपति मुकेश अंबानी (भारतकै सबैभन्दा धनी मानिस) को स्वामित्वमा छ जसले व्यावहारिक रूपमा उनी र उनको परिवारको लागि भवन निर्माण गर्ने आदेश दिए। यो भवनको २ 27 फ्लोरहरु छन् र कूल उपायहरुमा 37 37 हजार वर्ग मिटर भन्दा बढि। योसँग १ 168 सीटहरू, नौ एलिभेटरहरू, र एक सिनेमाको लागि पार्कि has पनि छ!
भिल्ला लिओपोल्डा, Villefranche-sur-meer (फ्रान्स): US $ 508 मिलियन
"विला लिओपोल्डा" फ्रान्सेली रिभियराको एउटा शहर, विलेफ्रेन्च-सुर-मेरको सबैभन्दा ठूलो विला हो। यो "La Belle quepoque" को शैलीको लागि फ्रान्सको स्मारकको रूपमा लिइन्छ। Thousand० हजार वर्ग मिटर भन्दा बढि बगैचा, rooms 44 कोठा, १ bath बाथरूम र एक बलिling गली यस भिलाको गठन गर्दछ जसको मालिक मिखाइल प्रोखोरोभ हो।
Hariri's लन्डन हवेली, लन्डन (इ England्ल्यान्ड): $: US मिलियन अमेरिकी डलर
यो सबै इ England्ल्याण्डको सब भन्दा महँगो निवास हो। यो हवेलीको १ 18,००० वर्ग मीटर भन्दा बढी छ, rooms 45 कोठा, औद्योगिक आकारको भान्छा, एउटा पौंडी पोखरी, र यसको सुनको विवरण १ लाख डलरको मूल्यमा पुग्छ।
हर्स्ट क्यासल, क्यालिफोर्निया: अमेरिकी $ million० मिलियन
हर्स्ट कासल सान सिमेन (क्यालिफोर्निया) मा अवस्थित छ, लस एन्जलस र स्यान फ्रान्सिस्कोबाट km०० किलोमिटर टाढा। यस महलमा bed 56 शयनकक्ष, bath१ बाथरूम, १ l लाउन्ज, बगैंचा, एक एयरस्ट्राइप, पौंडी पोखरी, टेनिस कोर्ट, एक चलचित्र थिएटर, एक हवाई पट्टी र संसारको सबैभन्दा ठूलो निजी चिडियाघर रहेको छ। तपाईं $ 25 को टिकट भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
एक हाइड पार्क, लन्डन (इ England्ल्यान्ड): २ US6 मिलियन अमेरिकी डलर
यो लक्जरी अपार्टमेन्ट जटिल मध्य लन्डनमा अवस्थित छ। यी अपार्टमेन्टहरू सबैभन्दा डरलाग्दो ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट छन् किनकि उनीहरूसँग बुलेटप्रुफ विन्डोज, आतंक कोठा र एसएएस द्वारा प्रशिक्षित अंगरक्षक छन्। यो २ 24 घण्टा कोठा सेवा र एक स्थानीय स्टोर छ।
यो tow टावरहरू द्वारा गठन गरिएको छ, प्रत्येकमा एक अद्भुत अटिक, र अपार्टमेन्ट प्रत्येकको २० मिलियन डलरको मूल्यमा।
फेयरफिल्ड पोखरी 'द ह्याम्प्टन', न्यूयोर्क: अमेरिका $ २२० मिलियन
यस घेराको हवेलीले दश हजार वर्ग मिटर नाप्यो। यो 29 कोठा र 39 बाथरूम छ। योसँग दुई टेनिस कोर्टहरू पनि छन्, एक बलिling गल्ली, पूल र बास्केटबल कोर्ट। यो हाल इरा रेनर्टको स्वामित्वमा छ।
हर्स्ट क्यासल, क्यालिफोर्निया: $ १ M मिलियन
यो दरबार हो जुन टाइकुन विलियम रान्डल्फ हर्स्टले निर्माण गरेका थिए। यस दरबारमा पचास भन्दा बढी कोठा, bath० बाथरूम र यसमा पौंडी पोखरी, टेनिस कोर्ट र एक सिनेमा पनि छ। यो सबै १ 160० वर्ग किलोमिटर भन्दा बढीको क्षेत्रमा
एलेना फ्रान्चुकको भिक्टोरियन भिल्ला, लन्डन: १$१ मिलियन अमेरिकी डलर
यो हवेलीमा पाँच तला र दस बेडरूम छन्। यो २०० 2008 मा युक्रेनी एलेना फ्रान्चुकले किनेको थियो, र यसमा धेरै सवारी, सौना, पौंडी पोखरी, जिम र सिनेमा रहेको छ।
पिन्सेकल, मोन्टाना (संयुक्त राज्य अमेरिका): १$5 मिलियन अमेरिकी डलर
यो विशेषाधिकार प्राप्त केहीहरूका लागि निजी स्की रिसोर्ट हो। यो टिम Blixseth सम्बन्धित छ, र १० कोठा र लक्जरीहरू जस्तै मसाज कोठा, बलिling गल्ली र दुई पौंडी पोखरीहरू छन्।
मैसन डी एल'आमिति, फ्लोरिडा (संयुक्त राज्य अमेरिका): अमेरिकी $ १ million० मिलियन
यो हवेलीमा १ rooms कोठा, seats० सीटको ग्यारेज र टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस र एक निजी सिनेमा जस्ता विलासिता छन्। यसको मालिक २०० since देखि प्रख्यात टाइकुन डोनाल्ड ट्रम्प हो।
हिज्जे मनोर, लस एन्जलस (अमेरिका): १ US० मिलियन अमेरिकी डलर
यो एक फ्रान्सेली महल शैली हवेली हो। योसँग १२3 कोठा र साढे hect हेक्टर जमिन छ। यसको गेराजमा १०० कारहरूको लागि स्पेस छ, निजी बलिling र सिनेमा छ, एक बार र टेनिस कोर्ट र स्विमिंग पूल।
Hala Ranch, Aspen, कोलोराडो (संयुक्त राज्य अमेरिका) - $ १5$ मिलियन
यो घर ,,२०० m2 हो र हाल संयुक्त राज्यको बजारमा तेस्रो सबैभन्दा महँगो घर हो। यसको विस्तार 380०,००० वर्ग मिटर छ।
टेन्सन कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, आफ्नै स्की ढलान, सौना र एक ग्यास स्टेशन जस्ता हवेलीमा १ rooms कोठा र विलासिताहरू छन्!
फ्लेउर डि लाइज, बेभरली हिल्स, क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका - $ १२ मिलियन
मासियानमा १ rooms कोठा र १ bath बाथरूम छन्। नौ सिटहरु र hect हेक्टर को एक भूखंड संग एक गेराज को अतिरिक्त। यस विलासिता मध्ये, यो 50० व्यक्तिको क्षमताको एक सिनेमा छ, एक पुस्तकालय र एक चलिरहेको ट्र्याक।
अपडाउन कोर्ट, सरे, इ England्ल्यान्ड - $ M मिलियन
यो क्यालिफोर्निया शैलीको हवेली इ England्ल्यान्डको विन्डलेम शहरमा अवस्थित छ। योसँग १० 10 कोठा र २ 23०,००० वर्ग मीटरको विस्तार छ। २०० 2005 मा यो संसारकै सब भन्दा महँगो घर थियो।
र यति धेरै लक्जरी म्यानहरू देखे पछि तपाईं एक किन्न चाहनुहुन्छ? धेरै महँगो छैन? अहिलेको लागि, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई यो शीर्ष मनपर्‍यो भने यो तपाईंको साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् र / वा तपाईंको लक्जरी हवेली आदर्शको बारेमा टिप्पणी पोष्ट गर्नुहोस्।
सब भन्दा महँगो फुटबल संकेत
संसारमा सब भन्दा छिटो फुटबलरहरू
सब भन्दा मूल मूर्ख आविष्कारहरू
संसारको सब भन्दा धनी मोडेलहरू
संसारमा सब भन्दा अविश्वसनीय एयरपोर्टहरू
संसारकै सब भन्दा अग्लो स्मारकहरू
विश्वका सब भन्दा दर्शनीय मार्गहरू
संसारमा १० सबैभन्दा महँगो कपडा ब्रांड
सब भन्दा कोमल र हास्यास्पद बिरालाको बच्चा
संसारमा सब भन्दा प्रसिद्ध ओपेरा घरहरु
बच्चाहरू र तिनीहरूका पाल्तु जनावरहरूको सब भन्दा राम्रा भिडियोहरू
सब भन्दा धेरै याद राखिएको विश्व कप मस्कट्स